"Hanafaka ny olona meloka Izy, eny, ny fahadiovan'ny tànanao no hamonjena azy" Joba 22:30.
Izay mendrika ny hitondra ny anarana hoe Kristianina, izany hoe manahaka an'i Kristy, dia ho vonton'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra sy fahadiovana, sy fitiavana sy fanajana an'Andriamanitra sy i Jesôsy Kristy izay nirahiny. Hitondra ny mariky ny lanitra ny toe-tsainy, ny fiteniny ary ny asany. Ho hitan'ny hafa fa efa nahita an'i Jesôsy sy nianatra Taminy izy, ho tsotra sady mafana ny vavaka ataony, ary hiakatra any amin'Andriamanitra amin'ny elatry ny finoana izy. Hianatra ao amin'ny sekolin'i Kristy izy, ka hanana fanetren-tena. Mahantra araka ny haren'izao tontolo izao izy, saingy manan-karena amin'ny fahasoavan'ny Fanahin'Andriamanitra. Koa afaka hitondra fitahiana sy zava-tsoa betsaka ho an'ny hafa izy noho ny toe-tsainy sy ny hery miasa mangina ananany. Ao anatiny mantsy i Kristy, toy ny loharano izay miboiboika ho fiainana mandrakizay. Rivo-pianana mankahery sy feno fanantenana no haeliny manodidina azy, ary ho menatra ireo tsy masina sy tia tena ary mihatsaravelatsihy, izay manana anarana ivelomana saingy maty. — YI, 22 Jona 1893
Mitondra toetra matanjaka sy fahambonian-toetra ny finoana sarobidy avy amin'Andriamanitra. Raha mitoetra ao anaty ny fahatsarany sy ny famindrampony ary ny fitiavany, dia hihazava hatrany ny fahatakarana ny fahamarinany. Ho ambony kokoa sy ho masina kokoa ny faniriana ny hanana fahadiovam-po sy fahazavan-tsaina. Voaovan'ny fifandraisana amin'Andriamanitra sy ny fandinihana ny Teniny ny fanahy izay mitoetra ao amin'ny rivo-piainan'ny fisainana masina. Midadasika ny fahamarinana, mahataka-davitra sy lalina ary lehibe tokoa, ka difotra tsy tazana ny izaho eo anatrehany. Mihamalefaka ny fo, ary manaiky hanjakan'ny fanetren-tena sy ny hatsaram-panahy ary ny fitiavana (...) Hiteraka fahatanjahan-tsaina ny fahadiovan-tsaina. — MH, 465,466 Sarobidy noho ny volamena ny fahadiovam-po sy ny toe-tsaina maha-te ho tia, na amin'izao fiainana izao na amin'ny fiainana ho avy. Izay madio am-po ihany no hahita an'Andriamanitra. — CG, 418